Soosaaraha Channel-ka Anchor-ga ugu Wanaagsan | Feejignaan
Kanaalka barroosinka lagu rakibo waxaa badanaa loo isticmaalaa mashaariicda qurxinta darbiga daahyada si loogu xiro loona taageero darbiga daahyada la taaban karo iyo keel darbiga daahkiisa.
Dhuumaha iyo marinnada tubbada kala duwan ayaa loo isticmaalaa in lagu taageero tuubooyin iyo fiilooyin kala duwan.
Habee wax la aqbali karo.
Ela dheereeyay channel barroosinka waxaa badanaa loo isticmaalaa gudaha qurxinta darbiga daah mashaariic lagu xirayo laguna taageerayo darbiga daahyada shubka iyo keel daah darbiga.
Dhuumo kala duwan iyo Jidadka tubbada waxaa loo isticmaalaa in lagu taageero tuubooyin kala duwan iyo fiilooyin.
1. Waqti yar oo rakib ah
Booska 2.Bolt lagu hagaajin karaa in steel channel (Iskulamaan kartaa qaladka dhismaha)
Rakibiddu waxay u baahan tahay oo keliya qalab fudud oo aan loo baahnayn koronto
Shaqaalaha rakibaadda waxay u baahan yihiin tababar gaar ah
5.High tayo sare leh galvanized anti corrosive ama qalabka birta ah ee aan daabacnayn ayaa si wax ku ool ah uga hortagi kara qaybaha (birta Ch8nnel, bool)
Birta kanaalka kulul ee duuban oo leh ilko ayaa leh awood jeexitaan sare oo loogu talagalay culeyska firfircoon, culeyska saameynta iyo culeyska dhul gariirka
8.Can lagu rakibi karo dhismooyin leh shuruudaha iska caabinta dabka
9.Waxaa loo isticmaali karaa rakibidda ku meel gaarka ah sida deyrarka
10.Baaritaanka rakibaadda muuqaalka fudud ee goobta (Xakamaynta Tayada)
11. Badbaadinta shaqaalaha iyo kor u qaadista wax soo saarka goobta
Mashaariicda kanaalka xargaha ee horay loo aasay
Wax soo saarka taageeraya: T-bool
T-boolku waa bir bir ah oo 8.8 ah, oo dusha sare waa galmo kulul (dhumucda lakabka zinc wuu ka weyn yahay 0.4 mm), oo loo isticmaali karo jawiga bannaanka iyo qoyan
Qalabka kale ee birta ah ee 304/316 ee xulashada
T-bolt si toos ah ayaa loogu ridi karaa jeexitaanka aluminiumka. Si otomaatig ah ayaa loo dhejin karaa loona xidhi karaa inta lagu jiro hawsha rakibida. Waxaa badanaa loo isticmaalaa lowska flange. Waa isku xiraha isku habboonaanta caadiga ah marka la rakibayo geesaha. Waxay ku saleysnaan kartaa baaxadda jeexdin ee muuqaalka iyo taxanaha kala duwan. Astaanta lagu doorto isticmaalka. T-bolts waa handarraabbadeedyo guuri kara.
Naqshad hal qaab ah oo meertada ah si loo hubiyo isku xirnaanta kalsoonida
Madaxa sii kordhaya ee T-bool ayaa loo habeeyay iyadoo loo eegayo qeexitaannada qaybaha guntamayaasha dillaacsan, guud ahaan qaabka S-qaabeeya iyo isbarbar socda. Kaliya waxay isku dari kartaa labada darbi ee birta kanaalka inta lagu guda jiro rakibidda, waxqabadka nabadgelyaduna wuu wanaagsan yahay.
8.8 steel birta kulul kulul galvanized, qaab guud wanaagsan
Qalabka darajada sare waxay hubin karaan sifooyin farsamo oo wanaagsan, geedi socodka qulqulka kulul, dhumucda lakabku waxay gaari kartaa in ka badan 0.4 mm. Xitaa waxaa loo isticmaali karaa 50 sano jawi bannaanka ah.
Handarraabbadeedii serrated waa la habeyn karaa, oo leh nasasho xoog leh iyo sii deyn shaqo
Qaybaha gundhigga ka sameysan ee loo yaqaan 'Slotted embedbed' ayaa loo qaybiyaa nooc baaktoor iyo nooc aan-baaqo lahayn Nooca sawtooth-ka ee gundhigga ah waxaa lagu dhejiyaa boolal baaxad leh oo xamuul fiican loogu talagalay kanaalka.
Hore: bir bir bir ah oo birta ah oo birta ah oo birta loogu xiro nidaamka hagaajinta dhagaxyada
Xiga: Dhexdhexaadinta Epoxy xabagta
Kanaalka Kaarboon Halfen
Tuur Channel Channel
Kanaalka Birta Sheet Galvanized
Kanaalka Bir Furring
Qiyaasta Kanaalka Birta